JanneM, Author at Somali Christian TV
Mucjiso: Naag 12 sano dhiigbax qabtey oo Ciise caafiyey. By Shania & Shino Gabo
Waxaa jirtay naag laba iyo toban sannadood dhiigbixid qabtay.Silec badanna ayay dhakhtarro badan ka heshay, oo wixii ay lahayd oo dhanna ayay ku bixisay, mana roonaanin laakiinse way ka sii dartay.Markay Ciise warkiisa maqashay… Markos 5: 25-34
Mucjisooyinkii Ciise Masiix. Biyihii ayuu qamri ka dhigay. By Shania & Shino Gabo
“Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Ashuummada biyo ka buuxiya, goortaasay buuxiyeen ilaa girgirka.Kolkaasuu wuxuu ku yidhi, Ka soo dhura oo u geeya ka miiska arooska madaxda u ah, wayna u geeyeen.Kii madaxda ahaa markuu dhadhamiyey biyihii khamriga noqday ma uu ogayn meel ay ka yimaadeen, laakiin midiidinyadii oo soo dhuray way ogaayeen; markaasaa kii madaxda …
Mucjisooyinkii Ciise Masiix. Biyihii ayuu qamri ka dhigay. By Shania & Shino Gabo Read More »
Ciise waa Wiilka Ilaah. By Shania & Shino Gabo
Ciise goortii la baabtiisay, ayuu markiiba biyaha kor uga baxay, kolkaasaa samooyinku furmeen, oo wuxuu arkay Ruuxa Ilaah oo sida qoolley oo kale u soo degaya oo dushiisa imanaya, 17 oo cod baa samooyinka ka lahaa, Kanu waa Wiilkayga aan jeclahay, oo aan ku faraxsanahay. Matayos 3:16-17
Somali Christian Testimonies 2019
Leave a Comment	/ Testimonies / By JanneM
“Laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii Ruuxa Quduuska ahi idinku soo dego; oo markhaatiyaal ayaad iiga noqon doontaan Yeruusaalem, iyo Yahuudiya oo dhan, iyo Samaariya, iyo meesha dunida ugu fog.” Falimaha Rasuullada 1:8